FAQs - Ningbo Ruifeng Plastika Co., Ltd
Inona no Hataoko fa santionany ny manamafy ny toetra?
Momba ny santionany fiampangana sy ny santionany saran'ny entana
3.if ianao mametraka ny lamina isika, dia refund ny santionany saran'ny entana ho anao.
3 taona kalitao antoka ho an'ny rehetra ny modely.
Nahoana ny tena loko dia tsy mitovy amin'ny sary fampisehoana?
Inona no teny fandoavam-bola?
100% na 30% ny vidiny mba ho tanteraka karama alohan'ny mamokatra, hanaiky T / T, L / C, Paypal, Western Union sy ny sisa.
Inona no tombony?
1.The avo pricevwith toetra tsara indrindra;
2.qualities ny fahamarinan-toerana be dia be;
3.Ordinery sy fashional lamba no omena eto, na inona na inona no embossed, pirinty, mafy orina mena mangatrakatraka, nampikambana, tantera-drano, ketrona na brozen. Afaka mahazo na inona na inona tianao, raha tsy manana isika dia hamantatra ny tsara indrindra mba hitady azy ho anao;
4.strict fanaraha-maso momba ny lahateny sy ny tsara rehefa avy-varotra fanompoana dia ny fanalahidin 'ny fitokisana avy amin'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao.
More 10 taona 'synthetic hoditra orinasa amin'ny 500 + teti-dratsy.
Mety ho ambony seza, Upholstery, kitapo, haingon-trano, fiara, kiraro, akanjo sns
Inona no teny ny lahateny?
Inona no teny sy ny fandoavam-bola ara-barotra teny?